Izindaba - Imboni yamabhayisikili izuza kokubili ukukhiqiza nokuchuma kokuthengisa
Umkhakha webhayisikili ufeza kokubili ukuchuma kokukhiqiza nokuthengisa
Isesha izindaba zakamuva mayelana ne- ibhayisikiliimboni, kunezihloko ezimbili ezingenakugwenywa: esisodwa ukuthengisa okushisayo. Ngokuya ngemininingwane evela ku-China Bicycle Association, kusukela kwikota yokuqala yalo nyaka, inani lezimboni elengeziwe ngebhayisikili lezwe lami (kufaka phakathiibhayisikili kagesi) imboni yezokukhiqiza inyuke ngaphezu kwama-30%. Kusukela ngoJanuwari kuya kuMashi, ukukhishwa kwamabhayisikili ngaphezu kosayizi obekiwe kwaba izigidi eziyi-10.7, ukwanda konyaka ngonyaka ngama-70.2%; Ukukhishwa kwamabhayisikili ngaphezu kosayizi obekiwe kwaba izigidi eziyi-7.081, ukwanda konyaka nonyaka ngama-86.3%.
Okunye ukukhuphuka kwentengo. Kusukela ekuqaleni kwalo nyaka, ezinye izinhlobo ze- amabhayisikili kagesi ngamandla aqinile okuxoxisana enyuse amanani abo okuthengisa aphakathi nendawo phakathi kuka-5% no-10%.
Ukuthengisa okushisayo nokwenyuka kwamanani kukhombisa ukukhiqizwa okuthuthukayo nokuthengiswa komkhakha wamabhayisikili kusukela ngonyaka odlule, kepha kungaqhubeka ngokulandelayo?
IZhonglu Co., Ltd.yaziwa kakhulu umenzi wamabhayisikilieChina. Amabhayisikili omkhiqizo i- “Forever” akhiqizwa izinkampani ezingaphansi kwawo, kanye neShanghai Phoenix neTianjin Feige, athathwa njengemikhiqizo kazwelonke. Umbiko wonyaka wenkampani ka-2020 ukhombisa ukuthi ngonyaka odlule inkampani ithole imali engenayo yokusebenza engu-734 million yuan, ukwanda konyaka ngonyaka ngama-25.60%, okuyimali ephakeme kakhulu eminyakeni eyishumi edlule.
Kuvelaphi ukukhula kwemali engenayo ephezulu? Ngokombono wesakhiwo sebhizinisi, ibhizinisi lamabhayisikili lingumthombo oyinhloko wemali engenayo yokusebenza kukaZhonglu, ebala u-78.8% wemali engenayo. Ngokuya ngevolumu yokuthengisa, ukuthengiswa kwe- amabhayisikilinabahamba ngezinyawo bakhuphuke ngo-80.77% unyaka nonyaka. Ngokwezimakethe ezahlukahlukene, imali engenayo yokusebenza emakethe yasekhaya inyuke ngama-29.42% unyaka nonyaka. Ukwanda okukhulu kokuthengisa kuhambise ngqo ukukhula okusheshayo kwemali engenayo futhi kwabona ukuguquka kokulahlekelwa kwenzuzo.
I-Xinlong Health ingumkhiqizi wezingxenye zamabhayisikili, futhi imininingwane yayo ikhombisa ukuthengiswa kwamabhayisikili ngonyaka odlule kusuka kolunye uhlangothi. Ngo-2020, inkampaniizesekeli zebhayisikiliama-oda akhuphuke kakhulu unyaka nonyaka. Ukwanda kokuthengiswa kwezingxenye zokungcebeleka kubangele ukuthuthukiswa kokusebenza kwezempilo kukaXinlong.
Imininingwane yokuthunyelwa kwemboni yango-2020 ekhishwe yiChina Bicycle Association ezinsukwini ezimbalwa ezedlule nayo ikuqinisekisile lokhu. Izibalo zikhomba ukuthi izwe lami lithumele amabhayisikili ayizigidi ezingama-60.297 ngonyaka odlule, okuwukunyuka konyaka nonyaka nge-14.8%. Ngemuva kokuthi i-United States imise amanani entengo emikhiqizweni ethile yamabhayisikili, ukuthunyelwa kwezimoto kuye kwanda, kwathi izimoto eziyizigidi eziyi-16.216 zathunyelwa e-United States unyaka wonke, ukwanda konyaka ngonyaka ngama-34.4%.
Mayelana nesizathu sokuthandwa kwe- amabhayisikili,ochwepheshe bezimboni bakholelwa ukuthi ngenxa yesidingo sokuvimbela ubhadane, isidingo sabantu sokuhamba amabanga amafushane sikhule kakhulu, futhi amabhayisikili, kufaka phakathi amabhayisikili kagesi, ngokungangabazeki ayindlela engcono kakhulu. Ngaphezu kwalokho, amazwe amaningi aseYurophu naseMelika ethule imixhaso yokuthenga, andise ukwakhiwa komzila wamabhayisikili nezinye izindlela zokukhuthaza, okuqhubeke nokukhuthaza ukusetshenziswa kwamabhayisikili.
Ingabe ukuthengisa okushisayo kungagcina? Umuntu ofanele ophethe i-China Autonomous Association ubikezela ukuthi ukukhishwa kwamabhayisikili kuzofinyelela kwizigidi ezingama-80 ngo-2021, futhi ukukhishwa kwamabhayisikili kagesi kuzoba cishe yizigidi ezingama-45. Kulindeleke ukuthi ukuthekelisa kwamabhayisikili namabhayisikili kagesi nakho kuzuze ukukhula kwamadijithi amabili.
Kusukela kuqale unyaka, kube nemibiko yabezindaba yokuthi ngenkathi ithengiswa kahle, ezinye izinhlobo zezimoto zikagesi zikhiphe izaziso kubathengisi ngokunyuka kwentengo. Intatheli yephephandaba i-Economic Daily muva nje ihambele izitolo eziningi zamabhayisikili kagesi yathola ukuthi isimo sesihlukile. Ezinye izinhlobo azikanyusi amanani azo, ezinye zithi zenyuse amanani azo, kanti ezinye zithe yize amanani enyukile, angaphinde anciphiswe ngesaphulelo.
Ngokombono wabakhiqizi, u-Emma izimoto zikagesiphambilini bakhiphe izaziso zokulungiswa kwentengo kubathengisi, futhi isilinganiso sokwanda kwemoto eyodwa sisukela ku-80 yuan kuya ku-200 yuan. Ngokusho kwabasebenza ngezimoto zikagesi iYadea, selokhu kuqale unyaka, inani lentengo yezimoto zaseYadea lenyuke ngo-100 yuan. Ngaphezu kwalokho, izinkampani eziningi zezingxenye zamabhayisikili kagesi zikhiphe izaziso zokunyuka kwamanani.
Ochwepheshe bezezimboni bathe ukukhuphuka kwentengo kuhlobene kakhulu nokukhuphuka kwamanani ezinto zokusetshenziswa. Kusukela ngo-Ephreli nyakenye, njengoba amanani entengo yempahla yenqwaba yamazwe omhlaba aqhubeka nokukhuphuka, amanani entengo yezimpahla ezifana nensimbi, i-aluminium, ithusi, amapulasitiki, amathayi, namabhethri ahlobene nokukhiqizwa kwemboni akhuphuke kakhulu. Izinguquko zamanani akhuphukayo zidluliselwa ezingxenyeni eziphakathi nendawo nasezimotweni ezisezansi.
Ngaphezu kwalokho, izinga elisha likazwelonke, elethulwa ngo-Ephreli 2019, lidinga ukuthi izimoto ezinamandla ezinamasondo amabili zithole isitifiketi se-3C. Abanye bakholelwa ukuthi ukuze bahlangabezane nezidingo zezinga elisha likazwelonke, abakhiqizi bamabhayisikili kagesi bazoqhubeka nokwenza ngcono izinto zabo nezinqubo, futhi izindleko zabo zizokwenyuka ngokufanele. Ngaphezu kwalokho, ukufunwa okwengeziwe kwamabhayisikili kagesi phakathi nobhadane kuzothuthukisa amanani abo okuthengisa.
Umuntu ofanele ophethe iChina Auto Association uthe ukukhushulwa kwentengo akukabi yinto ejwayelekile embonini. Njengamanje, kunezinhlobo ezimbili eziyinhloko zezinkampani ezikhuphule amanani. Uhlobo olulodwa ibhizinisi elingena embonini ngobunikazi be-Intanethi, futhi ivolumu yokuthengisa kwayo ayinkulu, futhi inzuzo yayo ibaluleke kakhulu; olunye uhlobo luyinkampani ehamba phambili enezwi eliqinile lemakethe futhi alinge ukukhuphula amanani entengo yomkhiqizo. Dlulisa ingcindezi yokunyuka kwezindleko zempahla eluhlaza.
Isikhathi Iposi: Aug-17-2021